ngokuvamile Lezi zintokazi alwazi seamstresses kwezicubu ngaphezulu. Lokhu akusona isimanga, ngoba ukukhetha amaphuzu izinto okukhethekile ngempela futhi stylish kudingeka uhambe kahle. Ngakho, ngokwesibonelo, kudingeka wazi lokho ithungwe kusuka izicubu ikakhulukazi ukuthi i-ukuthunga usilika isiketi isudi, okuzoba nomphumela, uma Oxford ihembe azithathe ... Kodwa into ukuze ihlale isikhathi eside, futhi udinga kahle ukumnakekela. Ngaphezu kwalokho, ukhetha impahla, kubalulekile ukuba acabangele ngezithako zawo: uma kukhona ukungcola eboyeni noma usilika, nokunye. Kodwa kanjani ningi hlobo hle ukwelukwa khona - ungabali! Indlela oluthile ukwelukwa unamathele. A crepe-chiffon zithandwa kakhulu. Ngakho, ake siyixazulule izindawo nezicubu.
Lokhu Isiqalo selisho zonke izindwangu ezenziwe ngendlela aluka ekhethekile. Crepes esanda kutholakala - emhlabeni wafunda ngazo ekhulwini nesishiyagalolunye. Zonke zizwile crepe de China - indwangu intandokazi yabo bonke ozinikezele Soviet. Ngakho, lo okuthiwa Chinese crepe French. Kusobala ukuthi kuleli zwe Abeluki yasungulwa indlela yokuqala. Crepe de China omunye umkhaya akugcini: lapha crepe satin crepe-chiffon futhi crepe UGeorgette. Bonke banobunye ngegama elifanayo umphumela ebusweni maholoholo, usayizi okusanhlamvu (endleleni, futhi uhumusha igama elivamile umndeni kwezicubu). Wakwenza kanjani lokhu? Zonke daba izindikimba ezisontekile kakhulu, okuyinto enye ohlangothini (the twist kwesokudla - twist kwesokunxele kanye noHezekeli). Lapho steamed ngendwangu, izindikimba ozama wriggle, kodwa budebuduze ke. Ngakho-ke, indwangu iba esingemnandi ngakho. Nokho, lokhu akuthinti nje ngisahlose yayo. Crepe umbala ikakhulukazi monochromatic ukugcizelela nesifanekiso salo. Izinzuzo izicubu yawo wonke umkhaya kulula futhi umbimbi ukumelana. Ngakho indwangu ziyokuwa kahle emzimbeni, ngoba akunzima kangako ukuba nginakekele. Iqembu crepe ukuthi kukhona in vogue futhi wanyamalala ke. Lezi izinto zivamile ekhiqizwa sigqoka futhi uziqede; ngaso sonke isikhathi ithungwe black ukulila band futhi zonke izinhlobo shawls. Manje-ke ngokuyinhloko blouses kanye amasudi. Elinye lamalungu ethandwa iningi lomkhaya sisetshenziselwa izinto crepe-chiffon. Yiziphi kunezinzuzo zako kanye nebubi, indlela ukumnakekela futhi lokho kumenza?
Hlobo luni Indwangu - crepe-chiffon?
Chiffon ngokwayo lihlotshaniswa isisa kalula, weightlessness. Chiffon igqoka ivezwa njalo kithi eziwubala romantic. Nokho, le nto futhi iziketi emangalisayo noma blouses. Into esemqoka - Ungeqisi it ne obala zezinto izogcizelela ubufazi yakho futhi sibalo, okukuvumela ukugqoka chiffon. Crepe-chiffon (isithombe okusesihlokweni esithi) kancane luthe ukuqina ngaphandle chiffon evamile. Welukwa crepe ngendlela, kungakho igama. imitha Square of kasilika Indwangu ukala amathathu nanhlanu kuphela amagremu. Lokhu, isibonelo, kuze kulula izikhathi eziyishumi ukuze imitha crepe satin. Crepe-chiffon akuvamile ethengisa ukuphupha - ngokuvamile ezinemibala efanayo noma ephrintiwe, okungukuthi, kanye nephethini. Ingaphezulu lokhu izicubu ngokuvamile zomile, kodwa crepe chiffon nge sputtering shiny. Akayena yinoma yimuphi phambi noma ohlangothini reverse. He is mnandi kakhulu uma uyithinta: mncane, engasindi, iphambana ekhuluma ngeminwe yakhe. Nokho, endaweni crepe-chiffon kukhona nemibi: kunzima kabi ukukwelapha, njengoba engalilaleli kakhulu lapho ukusika futhi ukuthunga. Thunga usebenzisa intambo mncane kakhulu futhi izinaliti, wenze eningi imigqa yaseZimbabwe ezincane.
Lokho kwenziwa of crepe-chiffon?
Awukwazi simelane ingubo esobala, okuyinto ukuhlobisa intombazane kuphela. Summer ngaphandle izinto ezinjalo nje akakwazi ukukwenza. Kodwa crepe-chiffon ungenza izinto futhi ukugqoka nganoma isiphi isikhathi sonyaka kanye cishe kunoma yisiphi isikhathi. The dress efanayo, kwahambisana ngu tights obukhulu wathungela, ngomala noma bushelelezi noma amasokisi kanye ijezi voluminous uyobheka kahle ukuwa ngasekupheleni. Kuyefana nasendleleni le isiketi chiffon. Crepe-chiffon ingubo ukushicilelwa ubukeka umxhwele, umnene futhi nenhle. Zonke izinhlobo shawls, scarves kanye amabhande asekhanda - kubuye "nomsebenzi wezandla" crepe-chiffon. izesekeli Good etholakala nge esobala ukukhanya iribhoni impahla: kungenzeka string buhlalu wakhe omkhulu - umgexo futhi silungele noma isongo! Crepe-chiffon draping ikufanele kahle. Ngakho kungani ungazami kombhede ukuze embhedeni? Noma umane ungasebenzisi Indwangu njengoba izilenge? Lokhu kuzokwenza ukunikeza freshness isitayela ekamelweni lakho. Ngaphandle crepe-chiffon linamandla kakhulu lantambama.
Indlela anakekele imikhiqizo?
Mangithi ukuthi ukwelapha nezicubu kufanele ngokucophelela. Ngakho, it is hhayi Kunconywa ukuba zigeze ngokwakho. Kungcono ubheke ilondolo noma ugeze izandla zakho umkhiqizo emnene kakhulu. Crepe-chiffon kabi ochotshoziwe, kodwa uma udinga pussycat ke, ngaleso sikhathi ironed kwimodi "Usilika", okungcono - ngokusebenzisa cheesecloth, yensimbi ezomile. Isihloko bonke imithetho izinto zakho ziyoba ngezamadodana eminyakeni ezayo wena.
Lapho ukuthenga indwangu?
Eliphezulu Indwangu ukuthola kwaba Kusengenzeka. Uma udinga bleached crepe-chiffon, kufanele ufune ibe yinde. Ukunikeza kukhetfwe tinhlobo letibanti letikhetsiwe online shopping lapho ungakwazi ukuthenga indwangu ngentengo ruble angamakhulu ayisithupha ngamunye imitha square.
Yini Usayizi lic ukukhetha?
Izikhwama elibizayo ngesikhathi intengo imali: American brand Umqeqeshi
Ithebula nesibani ngocingo: imithetho Ukukhetha. Yini okufanele libe isibani ongazifunda umfundi